Eps Machines, Eps Isikhunta Futhi Izingxenye elingasebenzi - Dongshen
Mayelana Nemishini Yethu
Sisebenzisa ithuluzi lomkhiqizo we-World first brand brand OKUMA ukucubungula amapuleti wethu womshini, ngakho-ke ukunemba kwemishini yethu kuphezulu.
Sisebenzisa izinto ezijiyile ukwenza imishini, ngakho-ke imishini yethu ihlala inzima futhi iqinile kunabanye esincintisana nabo, futhi imishini ingasebenza isikhathi eside. Amaklayenti ethu amaningi asasebenzisa imishini engaphezu kweminyaka engu-15 ubudala.
Imishini yethu ihlala isebenza ngokushesha kunemishini yebanga efanayo evela kwabanye abancintisana nabo. Amaklayenti angathola okungenani ukuphuma okungu-10% okuphezulu kumishini yethu.
Izingxenye ezingenisiwe nezesekeli ezinophawu oludumile zenza imishini yethu isebenze kahle futhi izinze, futhi inciphise nezindleko zokugcinwa kwemishini.
Uhlobo lwe-DS1100-FDS1660 EPS Batch type expander pre
I-SPY90-SPY120 i-Exander eqhubekayo eqhubekayo
Eminyakeni edlule, siye iqhaza professional EPS umshini imibukiso eJordani, eVietnam, eNdiya, eMexico naseTurkey njll Amazwe. Sisebenzise ithuba lombukiso, sihlangane namakhasimende amaningi asevele athenge imishini ye-EPS kithi yize engakaze ahlangane, futhi sihlangane nabangane abasha abaningi abanohlelo lokwakha izitshalo ezintsha ze-EPS. Ngokuxhumana ubuso nobuso, singaqonda kangcono imfuneko yabo, ukuze senze isixazululo esifanele bona. Phakathi kokuvakashelwa izimboni ezahlukahlukene, okungihlabe umxhwele kakhulu ifektri eyodwa ye-EPS ...
I-ICF, i-Insulated Form Concrete, eChina abantu bayibiza nangokuthi i-module ye-EPS efakwe noma amabhlogo we-EPS. Yenziwe ngumshini wokubumba we-EPS nesikhunta se-ICF Lolu hlobo lwemojuli ye-EPS lusebenza kahle kakhulu ekuvaleni ukushisa nasekuhlukaniseni umsindo. Kuhlolwe ukuthi ukongiwa kwamandla kwezakhiwo ezenziwe ngamabhulokhi e-ICF kungafinyelela kuma-65%. Amabhulokhi e-EPS ICF awahlinzeki nje kuphela ngendlela ephumelelayo yokwakha ukufakwa kodonga lwangaphandle ezindaweni ezibandayo, kepha futhi ixazulula izinkinga zokwakha njengokuxebuka kobuso bokunamathela kodonga lwangaphandle, nesikhathi eside sokwakha. Imodyuli ye-ICF ...
Inoveli engazelelwe yeCoronavirus yaphazamisa ukuhweba komhlaba wonke. Amakhasimende amaningi akhathazekile ngokuthi awanaye unjiniyela ongafaka noma ukulungisa iphutha emishinini ayithenge eChina. Yebo, kuyiqiniso ukuthi abahlinzeki abaningi banenkinga, kodwa hhayi enkampanini yethu, ngoba ngaphezu konjiniyela baseChina, onjiniyela abanolwazi kakhulu baseNdiya, nabanjiniyela baseJordanian. Vele ngoNovemba, unjiniyela wethu waseNdiya waya e-Yemen ukufaka umugqa wokukhiqiza we-EPS Shape Molding Machine. Iklayenti lithenge lonke i-EPS SHAPE MOLDING MACHINE LINE, kufaka phakathi i-EPS BATCH PREEXPANDER, i-SILOS, i-EPS SHAPE MOLDING MACHIN ...